၂၀၁၄ခုနှစ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ | MTSH
အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေသည် မိမိတို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အလားအလာကောင်းများစွာ ဖော်ဆောင်ပေးမည့် အရေးကြီး သည့်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်မည့် နို င်ငံတော်ပို့ကုန်မြှင့်တင်မှုကို အထောက်အပံ့ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ အကောင် အထည်ဖော်ရာတွင်သာမက ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပါများစွာ အထောက် အကူပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
(က) ကင်းလွတ်ဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ကင်းလွတ်ဇုန်လုပ်ငန်းတွင် စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ်သည့်နေ့မှ ပထမ ခုနစ်နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်၊
(ခ) လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်နယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ အခြားလုပ်ငန်းများတွင် စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ်သည့်နေ့မှ ပထမ ငါးနှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်၊
(ဂ) ကင်းလွတ်ဇုန်နှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်များအတွင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် ဒုတိယငါးနှစ်အတွက် တည်ဆဲဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့် ဝင်ငွေနှုန်းထား၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သက်သာခွင့်၊
(ဃ) ကင်းလွတ်ဇုန်နှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်များအတွင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် တတိယငါးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းမှရရှိသည့် အမြတ်ငွေကို ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် သီးသန့်ရန်ပုံငွေထား၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်းတွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှပ်နှံလျှင် ထိုရင်းနှီးမြှပ်နှံသည့် မြတ်စွန်းငွေအပေါ် တည်ဆဲဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့် ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထား၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သက်သာခွင့်၊
(င) ကင်းလွတ်ဇုန်ရှိ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူသည် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများနှင့် လိုအပ်သည့်အရန်ပစ္စည်းများ၊ စက်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းတို့ တည်ဆောက်ရန် အတွက် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်တို့ကို ပြင်ပမှ တင်သွင်းရာတွင် အကောက်ခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခများ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်ရှိ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူသည် ရောင်းကုန်မဟုတ်သော စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများနှင့် ယင်းတို့အတွက် လိုအပ်သည့် အရန်ပစ္စည်းများ၊ စက်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းတို့အတွက် တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းများ၊ ယင်းလုပ်ငန်းအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သည့် မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားပစ္စည်းများကို ငါးနှစ်အတွင်း အကောက်ခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခများ ကင်းလွတ်ခွင့်။
Rooftop Floor, UMFCCI Tower, No 29, Min Ye Kywa Street, Lanmadaw Township, Myanmar
© 2016 MTSH. All rights reserved. Powered by Information Matrix